Tuesday January 08, 2019 - 12:28:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa goordhow soo gaba gaboobay doorashadii madaxtinimada maamulka isku magacaabay Puntland ee saaka ka bilaabatay magaalada Garoowe.
Musharraxa Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kusoo baxay doorashadii maanta dhacday kadib markii ay wareegga sedaxaad isugusoo baxeen Jeneraal Asad Diyaano taliyihii hore ee ciidamada sirdoonka maamulka Puntland.
Hoggaamiyaha cusub ee maamulka Garowe ayaa horay usoo noqday wasiirka qorsheynta dowladda Federaalka sidoo kale wuxuu soo noqday xildhibaan katirsan baarlamaanka, dhanka siyaasadda ayay isku dhowaayeen Xasan Sheekh Maxamuud.
Doorashadii maanta ka dhacday magaalada Garoowe waxaa looga adkaaday Cabdi Wali Gaas oo ah hoggaamiyaha waqtigiisu dhammaaday sidoo kale waxaa kaalimaha hore ka galay Asad Diyaano oo ah Jaasuus xiriir laleh dowladda Mareykanka horayna usoo noqday taliyaha maleeshiyaadka Ashahaadda ladirirka PIS-ta.
Al Shabaab Oo Sheegatay Mas'uuliyadda Qaraxyo lagu dhaawacay Saraakiil katirsan Ciidanka Maamulka Puntland.
Maamulka Somaliland Oo shirkad Ajnabi ah ku wareejisay keenista Shidaalka.